အညာမှာ နေရာတိုင်းပေါက်တဲ့ ကန္တာရပင်က ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့နော် – ဂျမ်းပုံ
February 22, 2021 February 22, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
ကန္တာရ ၊ ကန္တာစိမ်း
မုံရွာဆိုတာ မြန်​မာနိုင်​ငံ အလယ်​ပိုင်​း အပူပိုင်​း​ဒေသထဲမှာရှိတယ်​၊ ပူပြင်​း​သွေ့​ခြောက်​​သော အရပ်​မှာ ​ပေါက်​​သော အပင်​ ၏ diversity က များများစားစား မရှိ၊
ဒီအပင်​​တွေထဲမှာ လူတိုင်​းသိပြီးသား ကန္တာရအပင်လေးအကြောင်းကို ရေးခြင် မိတယ်၊ ညက အိပ်​တာ​နောက်​ကျလို့ ဒီမနက်​ စက်​ဘီးစီးထွက်​တာ​လည်​း နောက်​ကျတယ်​၊ တက္ကသိုလ်​ campus တခုလုံးရဲ့ ၃၀% ​လောက ဒီအပင်​​တွေခြည်​့သာ လွှမ်​း​နေတာပါ
ထူးခြား တာက အခုအချိန်​က အပွင်​့တုံးပြီး အသီး​လေး​တွေ စသီ​းနေချိန်​လည်​းဖြစ်​တယ်​၊ ဒါ​ပေမည်​့ တပင်​စ ၂ ပင်​စ မှာ အပွင်​့ အဖူး​လေး​တွေက ရှိ​နေဆဲပါ၊ ကန္တာရအပင်​​ဘေး စက်​ဘီးကို​ထောင်​ပြီး အပင်​ရယ်​ အပွင်​့ အသီးပုံ​တွေ ကို အများကြီးရိုက်​ဖြစ်​တယ်​၊
ဒီအပင် အများစုကခြုံပင်အကြီးစားဖြစ်သလို တခါတလေကြီးမားလှသော အပင်ကြီး မျိုးဖြစ်နေတတ်​ပါတယ်။အညာမှာ နေရာတိုင်း ပေါက်​တယ်၊ ကျောက်စရစ် ကုန်းမြေ ကျပ်တီးမြေ၊ ဖုန်းဆိုးမြေ မြေမရွေး ပေါက်နိုင်တယ်​။ သုတေသ နစာတမ်းများအရ အမြစ်ကရေ ရဖို့ အရေး မြေ အောက်အနက် ပေ ၁၀၀ ကျော်ကျော်
အထိထိုးဖေါက် နိုင်တယ် လို့ဆိုထားပါတယ်၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု ခတ်က မျိုးစေ့တွေကို လေယာဉ်ပေါ်က ကျဲချလို့ပြန့်ပွားလာတဲ့အပင်လို့ ပါးစပ် စကားဆိုကြတယ်၊ Prosopis juliflora ရဲ့ မူရင်းဒေသက Mexico, South America and the Caribbean တို့ဖြစ် ကြတယ် နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်း Africa, Asia, Australia အထိပြန့်နှံ့ ထိုးဖေါက်လာပါတော့တယ်၊
အခုတော့ အပူပိုင်းဒေသအတော်များများရောက်လို့နေပြီ ။ အပင်ကို လူတိုင်းသိပေမဲ့ ဂရုထား သူ နဲလှပါတယ်၊ အညာက လူတွေ ကလည်း အပင်ကို ထင်းဆိုက်ဖို့ ​လောက်ဘဲ အသုံးပြုနေကြတာပါ၊ ကန္တာရပင်ဆိုတာ အ ညာရဲ့ပြယုဒ် တခုဘဆိုလည်း မမှားပါဘူး၊
အမည်နဲ့ လိုက်အောင် ကန္တာရထဲမှာ ရှင်သန် နိုင်တယ်၊ များသောအားဖြင့် မြေကနေ အကိုင်းများစွာ ဖြာ ထွက်တတ်တဲ့ ခြုံပင်အကြီးစားမျိုးပါ၊ ခုက္ကူ မြိုင်လမ်းမှာ အရမ်းကြီးမားသော ကန္တာရအပင်ကြီး တပင်ကို မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အရိပ်ကောင်း လွန်း တာမို့ သူ့ကိုမှီပြီး လဘက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်၊
မုံရွာ ပခုက္ကူ မကွေး ချောက် မန္တလေး စစ်ကိုင်း တဝိုက် နေရာ အတော်များများ မင်းမူနေ သောအပင်တပင်ပါဘဲ၊ မိတ္ထီလာမြို့ မြောက်ဖက် တပ်ဧရိယာ တဝိုက် တခုလုံး ဒီအပင်တွေဖုံးနေတာကို ပြန်သတိရမိတယ်၊ ဖြာထွက်နေသောအကိုင်းမှာ မာကြော လှသော အစိမ်းရောင် ဆူးကြီးများ ရှိတယ်၊ ကန္တာရဆူးက ဆူးမိရင်လည်း မလွယ်လှဖူး၊
ဒီဆူးကြီးတွေက တကယ်တော့ stipules ​ခေါ်သည်​့ ရွက်စွယ်များသာဖြစ်တယ်၊ အရွက်များက ၂ ဆင့် ငှက်မွှေး ရွက်ပေါင်း bipinnately compound leaves ​တွေပါ၊ ပန်းခိုင်ကတော့ ပုံမှာအတိုင်း ဆလင်​ဒါပုံစံ cylindrical spike ဖြစ်ပြီး ​အောက်​ဖက်​ တွဲလျား ကျနေပါတယ် ၊ အ​ရောင်​က စိမ်းဝါရောင် သန်းတယ်။ ပန်​းခိုင်​ထဲမှာ သေးငယ်သော လိင်စုံပွင့်တွေများစွာပါတယ် April ကနေ September အထိ ပန်းပွင့်ကြတယ် ၊
ပွင့်ဖတ်အုံ ( calyx )လေးက သေးငယ် လှပြီး ခွက်ပုံပါ၊ ပွင့်ချပ်အုံ (corolla )က လည်း အဝိုက် ၅ ဝိုက်ပါပြီး campanulate ခွက်ပုံ ဖြစ်သည်၊ ဝတ်ဆံဖို stamens ၁၀ ခုပါသည် ။ ထင်ရှားပြီးအပြင်ကိုထွက်နေသည်၊
ဒီပန်းကိုမြင်တိုင်း ဆရာ ဦးခင်မောင်တင် ကိုသတိရမိသည် ဆရာက ဝတ်မှုံအိပ် ထိပ်လေး (anther’s tip) ကိုကြည့်စမ်း တပည့်ရေ ဘာထူးလဲ? (hand len) လေးဖြင့်ကြည့်ရာ ထိပ်ဖြား မှာ အစိမ်းရောင် (fugacious gland) ဂလင်းလေးကိုမြင်ရပါတယ်၊ ဆရာနဲ့ လိုက်ရင်းရခဲ့သော ပညာတခုဖြစ်ပြီး အခုထိလည်းမမေ့သော အချက် တခု ပါဘဲ၊ ကန္တာရအသီးတောင့်က မအက်ကွဲသီးပါ၊ အသားထူပါတယ်၊
မာတောင့်တောင့် အနဲငယ်ကွေးတယ်၊ နဲနဲပြားပါတယ်၊ အစေ့ကတော့ ၁၀ စေ့ ကနေ ၂၅ စေ့အထိ ပါတယ်၊ အတွင်းမှာ pulp တွေပါပါတယ်၊ ကန္တာရ အပင်တွေ မျိုးပွားရာမှာလည်း အသီးများကလည်း အရေးပါတယ် အဲဒီအသီးတွေကို သတ္တဝါ ​တွေ ငှက်​​တွေက စားတယ် အစေ့များက မစင်နဲ့အတူစွန့်ပစ်ရာကနေ အပင်တွေ ပြန့်နှံ့သွားတော့တယ်၊
ကန္တာရဆိုတဲ့အပင်ဟာ ကောင်းတဲ့ အချက်​ ​တွေရှိသလို ဆိုးတဲ့ အချက် လည်းရှိတယ်၊ သူက သူတပါးပိုင်နက်ကို ကျူးကျော်နယ်ချဲတတ်သောသဘောရှိပါတယ်၊ ပေါက်ပွားနုှုန်း မြန်လွန်း လို့ နိုင်ငံအတော်များများမှာ ဘေးအန္တရာယ် ရှိသော ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သော အပင်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Ethiopia, in Hawaii, in Sri Lanka, Jamaica, the Middle East, India, Nigeria, Sudan, Somalia, Senegal and southern Africa နိုင်ငံတွေမှာ ဒီအပင်က ဒုက္ခပေးလို့ နေပါတယ်၊
Southwestern United States မှာတော့ အဓိက ပေါင်းပင်လို့ သတ်မှတ် ထားပါတယ်၊ သူ့ရဲ့အမြစ်က မြေထဲကို အနက်ကြီး ဝင်နိုင်တာရယ် အဲဒီအမြစ် ကနေ အပင်သစ်တွေ ထုတ်ပေးနိုင် တာကြောင့် အပင်ကိုသေအောင်သတ်ဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ်၊
Australia နိုင်ငံ မှာတော့ ဧက ဟက်တာပေါင်း ၈၀၀၀၀၀ နီးပါးဟာ ဒီအပင်တွေနယ်ချဲလာတာမို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စီးပွားရေးကို များစွာ ထိခိုက်မှုများစွာဖြစ်ခဲရပါတယ်၊ အနိမ့်ပိုင်းအကိုင်းအခက်တွေဆူးတွေကြောင့် တော်ရုံသတ္တဝါများ ဖြတ်သန်းဖို့ ခက်လှပါတယ်၊ ဒီအပင်ကြောင့် သဘာဝ မြက်ခင်းတွေပျက်စီးရပြီး ရေတိုက်စား ခြင်း​တွေဖြစ်စေပါတယ်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားများ အပြင်​ biodiversity များပျက်စီးရပါတယ်၊ ဒီအပင်တွေက ဝက်တွေ တောကြောင် ​တွေ အတွက်​တော့ နားခိုစရာ ဖြစ်တယ်၊
အ​ရေပြား​ရောဂါ​တွေအတွက်​ Ethnomedicinal Uses အ​နေနဲ့ ဒီအပင်​ကို သုံးကြတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ Scabies, Ringworm, and Abscess ​ရောဂါများကုသရာမှာလည်​းသုံးကြတယ်​၊ အရွက်​ထု​ထောင်​းပြီး မုန်​ညှင််​းဆီ mustard oil.ထဲထည်​့တယ်​ ၊ ရလာ​သော အနှစ်​ကိုမှ scabies, ringworm, and abscess ​ရောဂါများ ကုသရာမှာ သုံးကြတယ်​ ( District Mirpurkhas (Sindh))Constituents: ပါဝင်​ပစ္စည်​းများ အမြစ်​ အ​ခေါက်​ ထဲမှာ Alkaloids and apigeninbတွေပါတယ်​၊
အရွက်​ထဲမှာ tyramine and N-methyltyramine ပါတယ်​၊ ဒါ​တွေက အဓိက stimulant ​တွေဖြစ်​တယ်​။ ပင်​စည်​ထဲမှာ oleanolic acid, ursolic acid,aseries of the higher aliphatic alcohols, glycosides of campe sterol, stigmasterol, β-sitosterol, and D (+)-pinitol ​တွေလည်​းပါတယ်​။
လေ့လာမှုများအရ သိရသည်​မှာ sterols, carbohydrates , glycosides, gums, mucilage, and flavonoids in honey mesquite. 2, 3-dihydro-1H-indolizinium chloride ​တွေလည်​းပါဝင်​​နေပြီး အားလုံးဟာ အပင်​ရဲ့ အဓိက ပါဝင်​ပစ္စည်​းများ important constituent ဖြစ်​လို့​နေကြတယ်​။
အမြစ်​က​နေရ​သော tea ကို umbilical hernia in children ကုသရာမှာ သုံးတယ်​၊ အခါက်​အတွင်​းသားကို ဆားရည်​ထဲမှာ ထည်​့ပြုတ်​ပြီး အစာမ​ကြေ​ရောဂါအတွက်​​သောက်​သုံးနိုင်​တယ်​။ အပင်​ကရ​သော ​ကော်​​စေး Gum ကို ​ရေမှာ​ဖျော်​ပြီး sore throat ကုရာမှာ သုံးနိုင်​တယ်​။ အရွက်​အမှုန်​့ကို​ရေမှာ​ရောပြီး ရလာ​သောအရည်​ကို ညှစ်​ယူပြီး sore eyes မျက်​​စေ့နာကို ကုနိုင်​တယ်​၊ Mesquite ကို အများအားဖြင်​့ infections, open wounds, and skin ailments ​ရောဂါ​တွေကို ကုကြတယ်​။
Mesquite ဟာ antibacterial, antifungal ဂုဏ်​သတ္တိလည်​းရှိတယ်​။
အီသီယိုပီးယားလို နိုင်ငံမှာ ၁၉၈၀ လောက် က စိုက်ခဲ့ကြတယ်၊ ပေါက်ပွားနှုံး မြန်လွန်းတော့ ဒေသခံအပင်တွေကို ချိန်းခြောက် လာပါတယ်၊ အပင်ရဲ သဘာဝအရ ဒေသခံ သတ္တဝါတွေအတွက် အစာအဟာရ မထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မြက်ခင်းတွေကို သူက တခဏခြင်း ဖုံးလွှမ်းလာတော့တယ် ထင်းအတွက်အဆင်ပြေသော်လည်း ဒေသခံရွာသားများက devil trees လို့ ခေါ်ပြီး အမြစ်ပြတ်ခြေမှုံးကြရတယ်၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာလည်းအလားတူပြသနာမျိုးဖြစ်လာတယ် ၊အစက​တော့ မြေဆီတိုက်စားခြင်းကာကွယ်ဖို့နဲ့့အရိပ်ရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစိုက်ခဲ့တယ် နောင်တော့ အပင်တွေက တဖြည်းဖြည်း နယ်ချဲ့ လာတယ် မြက်ခင်းပြင်ကြီးတွေအထိ ထိုးဖေါက်လာတော့တယ်၊
ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း အလားတူပြသနာ ​လေးတွေရှိပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဒေသခံ များ က ကန္တာရပင်ကနေ နေ့စဉ် လိုအပ်သော လောင်စာ ထင်းကို တနည်​းနည်​းနဲ့ ​ထောက်​ပံ​့ ​ပေး​နေပါ​သေးတယ်​၊ ဘယ်လို အပင်မှ မပေါက်နိုင်သော ကျပ်တီး ​မြေတွေအပေါ်မှာ သူကရှင်သန်နိုင်လို့ ကောင်းကျိုး အချို့ကတော့ ပေးနေတဲ့ အပင်ပါ၊ အညာနေပူပူကို ကန္တာစိမ်းပင် အရိပ်က တွန်းလှန်နိုင်တယ်၊
ကန္တာရ လို လွင်ပြင်ကြီးတွေကို တခဏအတွင်း စိမ်းလန်းစေနိုင်သောအပင်တပင်တခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ အပင်တိုင်း ​ကောင်းသည်မဆိုသာသော်လည်း အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေတတ်တာပါ၊ တက္ကသိုလ်​ နယ်​​မြေ အတွင်​းက စုံတွဲ​တွေက​တော့ အ​တော်​ သ​ဘောကျ မည်​့ အပင်​လို့ ဆိုရ​လေမလားဘဲ…
Previous Article ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်တတ်သူများအတွက် လက်တွေ့ကြက်သွန်ဖြူ
Next Article အိိမ်မှာထားရင်အိမ်ကိုခိုက်တက်ပြီးအိမ်သားတွေကံဆိုးစေလို့မထားသင့်တဲ့ပစ္စည်းမျာ
Total visitors : 557,772
Total page view: 808,122